Pejy fitobiana fitsapana - Blueprint ho an'ny famolavolana
Rindrambaiko ho an'ny pejy fitsapana azo zahana
Alakamisy, Septambra 6, 2012 Alakamisy, Septambra 6, 2012 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo sary malaza indrindra hitanay dia navoakan'ny mpanohana teknolojia anay,Formstack , atao hoe Fampiharana faran'izay tsara indrindra.Formstack dia mora ampiasaina mpanamboatra endrika an-tserasera miaraka amin'ny fahaizana manangana pejy fitobiana amin'ny vahaolana mitovy.
Ny Blueprint ho an'ny pejy fitaterana fitsapana tanteraka: Ny pejy fitobiana dia misy vondrona singa azo faritana. Ireo banga fananganana aseho etsy ambany dia azo ampiasaina ho toy ny mpitari-dalana rehefa mamaritra sy mamorona pejy fitaterana tonga lafatra anao manokana!
Ny olona ao amin'ny KISSmetrics dia nanaparitaka ny pejy niantsona tamin'ity sary mahafinaritra ity, manome anao ny fahatapahana ireo faritra izay tokony hizahanao toetra.
Tags: ab testingfiantsonana pejyfandaharana pejy fitateranafitsapana ny pejyfanandramana marobe
Verge dia mampifangaro ny famoahana e-commerce sy nomerika
Sep 6, 2012 ao amin'ny 12: PM PM
Misaotra nizara infographic mahafinaritra be! Tiako ny mahita lahatsoratra manaparitaka singa hanandramana ary hanamora ny fanaovana tsaratsara kokoa ny mpivarotra.